Manje neze uhlangana nomuntu akasebenzisi kuselula. Cellular ukuxhumana semi- ezimpilweni zethu, futhi abanye nje musa uthole indawo, uma uke walahlekelwa ke ngasizathu simbe. Zonke opharetha bamaselula njalo anikele ezihlukahlukene amazinga kanye nezinsizakalo, ngalinye elikwazi liba inzuzo ngaphezulu. Ngalesi Yiqiniso ukumaketha umuntu angakhetha bona tariff futhi izimo efanele ngaphansi kwazo kuye. Ngokuvamile, ngoba lokhu kukhona ushintsho hhayi kuphela we plan tariff, kodwa futhi izinombolo ngakhoke SIM khadi. Kwenzeka ukuthi uqale ukusebenzisa amasevisi elilodwa opharetha, omunye uyaqaphela ukuthi kuyinto unganelisekile okuthile, athenge ikhadi elisha has a ehlukene, opharetha ofanelekayo. Futhi eqinisweni, kuzo zombili izimo, abasebenzisi kungenzeka kunemisebenzi yokuthi abazi indlela kusebenze ikhadi le-SIM. MTS - omunye walabo opharetha, ababelwa kumakhasimende ngezindlela ezihlukahlukene, kuhlanganise nokunikeza amakhadi amasha nge yamanani elula futhi kunenzuzo, yebo, zidinga kusebenze. Ngesikhathi esifanayo, nakuba at efika kuqala kubonakala sengathi inqubo kusebenze uqobo iyinkimbinkimbi, empeleni esicacile, futhi ungakwazi ukubhekana naso ngemizuzu embalwa nje.
Kunezindlela ezintathu ezilula indlela kusebenze SIM card MTS. Kusukela kubo, ungakhetha eyodwa okungukuthi ku umphefumulo kanye elula kunazo.
1. Indlela elula ukusiza ukusebenza yokuthengisa umsizi kusukela salon, lapho wathengela ikhadi. Bheka kuye ukuze kusebenze ikhadi le-SIM MTS. Ukusebenzisa le ndlela, abaningi abanawo ukwenza lutho. Futhi akusho ukuthi kusebenze ikhadi ngosuku lokuthenga. Lokhu kungenziwa kamuva, ngesikhathi sakho. Ngo ngokuphelele iyiphi salon consultant MTS yokuthengisa bayokujabulela ukukusiza, futhi nje imizuzu embalwa ikhadi azosebenza. Uma unqume ukwenza lokho kanye, thatha isivumelwano ne-opharetha futhi iphasiphothi.
2. Enye indlela kusebenze ikhadi le-SIM MTS, wena ufake iPIN. Ngokuvamile, opharetha ubhala lekhodi ekhethekile pin ekuqaleni kwale ncwajana, okuyinto unamathele SIM khadi. By endleleni, lo mhlahlandlela iqukethe eziningi imininingwane ewusizo umsebenzisi, isibonelo, eziningi izinombolo iDemo nokuthile okufunwa kithi, iziphi ke kakhulu ukuxhumana kwakho.
3. Ekugcineni, indlela yokugcina ukwenza kusebenze MTS ikhadi. He is ukufaka futhi ushayele inombolo * 111 # ikhadi. Uma umzamo akuphumelelanga, sicela ushayele 0890 noma usebenzise inombolo 8 (800) 333-08-90. Uma uthola ngokusebenzisa, uyobizwa ngokuthi isibalo ikhadi ofuna kusebenze. Ingadinga idatha iphasipoti, ngakho preliminarily ukubeka eshidini elilandelayo. Futhi, faka isivumelwano ne-opharetha.
Yiqiniso, kungcono kakhulu ukunquma ukuthi kusebenze amakhadi MTS SIM ukwenza usuku lokuthenga. Lokhu kungabi sengxenyeni eyinkimbinkimbi eyengeziwe esikhathini esizayo. Futhi khumbula, ngisho noma sazi ukuthi singaphila kanjani kusebenze ikhadi le-SIM Nokho, MTS, isinyathelo imprudently futhi ithemba nabakhwabanisi, kungakhathaliseki ukuthi uzama ukuba uyisebenzise ngeke isebenze nganoma iyiphi indlela. Ngakho-ke, kumelwe siqaphele kakhulu, ukuthenga ikhadi le-SIM ku esitimeleni, a yokubeka enxanxatheleni yezitolo noma emgwaqeni. Hlala ubukele!
Indlela ukunamathisela ifilimu ngaphandle Bubbles ocingweni: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Numb ngakwesokunene isithupha: Izimbangela Nemiphumela
Kungani ungaqali CS: GO? Amaphuzu asemqoka kanye isixazululo.